नेप्सेमा आज झिनो सुधार, चन्द्रागिरि हिल्सका लगानीकर्ताले कति कमाए? - Everest Dainik - News from Nepal
नेप्सेमा आज झिनो सुधार, चन्द्रागिरि हिल्सका लगानीकर्ताले कति कमाए?
२०७७, ३ चैत्र मंगलवार
काठमाडौंः धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज झिनो अङ्कले सुधार भएको छ । लगातार ओरालो लागेको बजारमा आज २.५६ बिन्दुले नेप्सेमा सुधार आई दुई हजार ३९१.७४ मा पुगेको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक ०.४४ ले बढेर ४३०.४९ मा पुगेको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, बजार पूँजीकरण ३१ खर्ब
याे पनि पढ्नुस नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट
याे पनि पढ्नुस नेप्से ओरालो, लघुवित्त कम्पनिको शेयर मूल्य घट्यो